Barcelona Oo Labadan Xiddig La Wareegi Doonta Bisha January & Qorsheyaasha Ronald Koeman Oo Bannaanka Yimid Kaddib Guul-darradii Getafe - Gool24.Net
Barcelona Oo Labadan Xiddig La Wareegi Doonta Bisha January & Qorsheyaasha Ronald Koeman Oo Bannaanka Yimid Kaddib Guul-darradii Getafe
October 18, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Ronald Koeman ayaa si degdeg ah ugu dhaqaaqaya laba ciyaartoy oo bisha Janaury uu kusoo kordhin doono kooxdiisa, kuwaas oo kala ah Gini Wijnaldum iyo Eric Garcia.
Koeman ayaa xagaagii dhowaa doonayay kubbad-sameeyaha Liverpool ee Wijnaldum iyo difaaca Manchester City ee Garcia oo uu doonayay inuu keeno Camp Nou, laakiin dhibaatada lacag yaraanta ee kooxdiisa haysata ayaa labadoodaba u diidday inuu lasoo saxeexan karo.
Laakiin bisha January ayuu labadan xiddig la furi doonaa wada-hadallo si uu qaab bilaash ah ugu soo qaadan karo amaba lacag aad u hoosaysa maadaama ay qandaraasyadoodu ku eg yihiin bisha June ee sannadka dambe.
Sidoo kale, waxa uu tababaraha reer Netherlands sii wadi doonaa raacdada uu ugu jiro weeraryahanka Lyon ee Memphis Depay oo isaguna labada hore kala mid ah xaaladda heshiiska oo sannadkiisii ugu dambeeyey uu ku jiro.
Barcelona oo xalay guul-darro xanuun badan oo 1-0 ah kala kulantay Getafe oo ay marti u ahayd, ayaa waxa la sheegay inay ku keenayso Koeman inuu si dhaqsiyo ah u galo suuqa oo uu saxeexyo sameeyo.
”Xiisahayaga Wijnaldum waa mid xooggan.” Sidaa waxa yidhi Ronald Koeman oo xaqiijinayay inay doonayaan laacibka Liverpool, waxaanu intaa ku daray: “Waxaanu doonaynay inaanu halkan keeno xagaagii sababtoo ah wuxuu awood u leeyahay inuu sameeyo orod heersare oo khadka dhexe ah iyo inuu yimaaddo xerada ganaaxa waqtiga ku habboon.
“Waxa aan ku qanacsanahay inuu dhab ahaantii wax kusoo kordhin doono kooxda, laakiin xaaladda dhaqaale ee Barcelona ayay kooxdiis (Liverpool) ogeyd.”
Intaa kaddib waxa uu Koeman ka hadlay Eric Garcia, waxaanu yidhi: “Hubaal ahaan waxa jirta fursad kale oo aanu ku heli karayno Garcia. Laakiin waqtigan masii garan karayo sida ay xaaladda dhaqaale ee kooxdu noqon doonto bisha January, markaa waa inaan sugo oo aan eego.”
Memphis Depay ayaa isagana la sheegay in Barcelona ay isfaham lasii gaadhay oo bisha January ay lasoo saxeexan doonaan, waxaana isaga oo Koeman ka hadlaya uu yidhi: “Wax kasta diyaar ayay ahaayeen laakiin sharciga La Liga ayaanu ogeyn in marka hore ay tahay inaanu ciyaartooyo iibino ka hor inta aanaan lasoo saxeexan bartilmaameedkayaga.
“Dhamaadkiina suurtogal may ahayn. Waa wax laga niyad-jabo laakiin Memphis ayaa ogaa sida ay xaaladda Barca tahay.”